Soo dejisan AOMEI Backupper 3.5 Standard... – Vessoft
AOMEI Backupper – habboon in la isticmaalo software-celinta xogta. Software wuxuu kuu ogol yahay in la sameeyo gurmad, kaban saxannada adag, partitions nidaamka iyo faylasha. AOMEI Backupper awood u ah user in meel nuqulo ka mid ah macluumaadka si drives kale oo adag. Software ayaa sidoo kale waxaa ku jira Scheduler ogolaanaysa in aad ku dhigay taariikhda iyo waqtiga gurmad ah si toos ah xogta. AOMEI Backupper kuu ogolaanayaa inaad hubiso daacadnimada hayaan xogta iyo abuuro gudbiyayaal duubtid ee nidaamka dib u soo kabashada ay dhacdo in fashilka.
Function of cloning xogta
Сheck daacadnimada hayaan xogta
Abuuritaanka gudbiyayaal duubtid
AOMEI Backupper Software la xiriira:
English, Français, Español, Deutsch... Hetman Partition Recovery 2.4 Standard iyo Portable